News Collection: सिनेमासंगै कसरी बदलिए राजेश ?
सिनेमासंगै कसरी बदलिए राजेश ?
नेपाली सिनेमा मुलधारवाट परिवर्तन हुन सकेन भन्ने आरोप लागिरहेको छ । सिनेमाको मुलधार परिवर्तन नभएपछि दर्शकहरु पनि हलमा जान छोडे र नेपाली सिनेमा वर्षमा ८० भन्दा वढि असफल भए । तर, यो वर्ष प्रदर्शनमा आएको चलचित्र लुट र चपली हाईटले राम्रो व्यापार गरेपछि नेपाली सिनेमाको धार परिवर्तन भएको अड्कल काटिएको छ । सिनेमा वनाउनेहरुले चलचित्रको धार फरक र मल्टिप्लेक्सका दर्शक तान्ने खालको वनाउन खोजीरहेका छन् । यसका लागि कतिपयले आफुले तयार पारेको विषयवस्तु समेत परिवर्तन गरेका छन् । विषयवस्तु परिवर्तन त सामान्य कुरा नै हो, तर एक सिनेमाका निर्देशकले त चलचित्रवाट नेपालकै एक चर्चित नायकलाई समेत परिवर्तन गरेको खवर अनलाइनखवरले प्राप्त गरेको छ ।
क्रृषि न्यौपानेले हरी खनालको लगानीमा चलचित्र ज्वाला निर्देशन गर्ने तयारी गरेका थिए । जसका लागी गित रेकडिङ पनि गरिएको थियो, संंगीतकार चेतन सापकोटाको संगीतमा । तर, एकाएक चलचित्रको धार परिवर्तन भएपछि उनले ज्वालाको कामलाई स्थगीत गरेका छन् । ज्वालाका लागि नायक राजेश हमाललाई एगि्रमेन्ट समेत गररे पारिश्रमिक समेत दिईएको थियो ।
तर, चलचित्र ज्वालालाई नवनाई उनले अव चलचित्र लक निर्देशन गर्ने भएका छन् । जसका लागी सम्पुर्ण कलाकार नयाँ खोजिएको छ । उनले, नायक राजेश हमाललाई ज्वाला सिनेमाको काम केही पछि गर्ने वताएका छन् । तर, श्रोत भन्छ, चलचित्र ज्वाला अव निर्माण हुने हो या होईन यो थाहा छैन । तर, राजेश हमाललाई नै परिवर्तन गरी चलचित्र लक निर्माण गर्न लागिएको हो । चलचित्र ज्वालाका लागी नै भनेर तयार पारिएका गितहरुमा केही परिवर्तन गरी लकका गित तयार पारिएको छ ।
यो चलचित्रको छायांकन अव केही दिनमै सुरु हुने छ । यो खवर, नायक राजेश हमालका लागि निक्कै दुखद खवर हो । नेपाली सिनेमाको धार परिवतर्न भएपछि नायक राजेश हमालले पनि अव सिनेमा खेल्ने धारलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । किनभने निर्माता तथा निर्देशकहरु फरक धारका सिनेमा वनाउन कस्सिएका छन् र उनीहरु नयाा नयाा कलाकार खोजिरहेका छन् । राजेश जि, अव त केही सोच्ने पो हो की ?